Odayaasha reer Beledweyne oo ka horyimid awaamiir ka soo baxda... | Universal Somali TV
Odayaasha reer Beledweyne oo ka horyimid awaamiir ka soo baxday dowladda
Odayaasha Dhaqanka ee Magaalada Beledweyne ee Gobolka Hiiraan ayaa waxay ka horyimaadeen awaamiir ka soo baxday Dowladda Federaalka Somaliya.
Dowladda ayaa mar sii horeysay waxay dalbatay in ciidan ku sugan Magaalada Beledweyne laga saaro, lana geeyo Gobolka Galgaduud. Ciidankaasi oo bilaa hub ah ayay dowladdu sheegtay in ay iyadu siineyso wixii qalab ah, ee ay u baahan yihiin.
Odayaasha Dhaqanka oo maanta kulan ku yeeshay Magaalada Beledweyne ayaa waxay sheegeen inaanay ciidamadaasi ka taggi doonin magaaladaasi, isla-markaana aanay taggi doonin Gobolka Galgaduud.
Odayaasha Dhaqanka ayaa waxay Dowladda Federaalka ku eedeeyeen inay fara-gelin ku hayso reer Hiiraan, iyagoona dalbaday in ay Beledweyne isaga baxaan Saraakiil Ciidanka Xoogga Dalka ka tirsan, oo ka tagey Dhuusamareeb, gaarayna Beledweyne.
Saraakiishan ayaa waxaa horkacaya Taliyaha qaybta 21aad ee Ciidanka Xoogga Dalka, Cabdicasiis Cabdullaahi Qooje, kuwaa oo saacadihii la soo dhaafay Magaalada Beledweyne kula kulmay Madaxweynaha Hirshabelle, Maxamed Cabdi Waare.
Kan-xigaShirweynaha beelaha Galmudug oo ka so...
Kan-horeBeesha Caalamka oo war ka soo saartay...
50,415,682 unique visits